चर्चामा आभाषको नँया गीत, संयम र निशाको यो कस्तो प्रित ! « Mazzako Online
चर्चामा आभाषको नँया गीत, संयम र निशाको यो कस्तो प्रित !
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौ ।
अहिले नायिका निशा अधिकारी र नायक संयम पुरीको प्रेम सम्वन्ध निकै चर्चामा छ । तर त्यो चर्चा रियल लाईफको प्रेमको नभएर रिल लाईफको हो । प्रतिक्षित फिल्म ‘आभाष’ को भर्खरै सार्वजनिक अन्तर्पुस्ताको प्रेम दर्शाउने ‘तिम्रो तस्विर’ बोलको गीत अहिले चर्चामा छ । जसमा निशा र संयमको गजबको ‘लभ क्यामेस्ट्री’ लाई फिचरिङ गरिएको छ ।
भनिन्छ, प्रेममा उमेर समुह र कुनै पनि तह हुँदैन् । यस्तै विश्वास बोकेको फिल्म ‘आभाष’ को यो गीतमा प्रकाश नेपालीको संगीत र सन्तोष लामाको स्वर छ । शब्द सुजन सुवेदीले लेखेका हुन् । गीतको भिडियोलाई गम्भिर विष्टले निर्देशन गरेका हुन् । निशा र संयमसँगै फिल्ममा आश्मा डिसी र सलोन बस्नेतको पनि मुख्य भूमिका छ ।
फिल्म ‘आभाष’ को स्क्रिप्ट निर्देशक पौडेल र अर्का निर्देशक हेमराज विसीले लेखेका हुन् । पौष २५ गते प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘आभाष’ मा गोविन्द शाही, पवन श्रेष्ठ र दीपक शाहीको लगानी छ । चन्द्र पन्तको द्धन्द्ध निर्देशन रहेको फिल्म ‘आभाष’ लाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेका हुन् । सुदीप श्रेष्ठको कलरिङ रहेको फिल्ममा निलिमा शर्माको फेसन स्टाइल छ ।